Semalt Islamabad Expert: Top 10 mpikolokolo tranonkala malaza sy bots
Misy karazana bots ny roa ao amin'ny aterineto, izay antsoina hoe botsotra sy bota ratsy. Tokony handray fepetra hentitra amin'ny bota ratsy ianao satria afaka mandany ny dradrainan'ny DDN tsy ho ela. Ankoatra izany, ny boka ratsy na ratsy dia mangalatra ny votoatin'ny tranonkalanao ary maka ny loharanom-pifandraisana. Etsy andaniny kosa, ireo bôtso tsara (antsoina hoe mpitsikilo amin'ny tranonkala) dia tokony hikaroka tsara rehefa manampy ny fikajiana ny tranokalanao amin'ny valin'ny fikarohana , toa an'i Bing, Google, ary Yahoo.
Michael Brown, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia manome toky fa misy an'arivony ny robots sy mpitsikilo amin'ny tranonkala manala ny aterineto, saingy ireto manaraka ireto no malaza indrindra.
Ny Googlebot dia iray amin'ireo mpitoraka bilaogy tsara indrindra sy malaza indrindra hatramin'izao. Mampiasaina betsaka amin'ny fampidinana ny votoatin'ny tranonkala sy lahatsoratra ho an'ny valin'ny fikarohana Google. Ny endri-javatra tsara indrindra amin'ny Googlebot dia ny manome azy ireo fitaovana sy safidy marobe. Amin'ny ankapobeny, ny Googlebot dia manambara Google fa ny pejy tsy maintsy hajaina ary ny tokony hijanona.
Tahaka ny Googlebot, ny Bingbot dia mpikirakira tranonkala malaza amin'i Microsoft. Efa nandritra ny taona maro izy io ary natao hamokarana vohikala amin'ny valin'ny fikarohana ao Bing. Bingbot dia fanoloana tena tsara ho an'ny MSN bot. Ny safidy manan-danja indrindra dia antsoina hoe Fetch tahaka ny Bingbot, izay hita ao amin'ny Bing Webmaster Tools. Ity safidy ity dia afaka mandefa pejy handraisana sy hampiseho amin'ny valin'ny Bing.
The Slurp Bot dia Yahoo mpanafika tranonkala, saingy ampiasain'i Bing. Ny tranonkala dia tokony hamela an'i Yahoo Slurp hiditra ny pejin-dry zareo amin'ny fisehoany ao amin'ny valin'ny Yahoo Mobile Search. Ity mpikaroka ity dia ampiasaina hanangona votoaty avy amin'ireo tranonkala mpiara-miasa mba hampidirana ao amin'ny Yahoo News, Yahoo Sports ary Yahoo Finance.
Ny DuckDuckBot no mpilalao malaza sy tsara indrindra amin'ny DuckDuckGo. Ity
Ny Sogou Spider dia mpikaroka tranonkala malaza ao amin'ny Sogou.com. Ity milina fikarohana Sinoa ity dia natomboka tamin'ny taona 2004 ary manana laharana 103 amin'ny Alexa. Tokony hotadidinao fa ny atodin'ny tranokala Sogou dia tsy manaja ny fitsipiky ny aterineto robot.txt ary voarara amin'ny toerana samihafa noho ny fitifirana tafahoatra azy.
Ity mpandika tranonkala ity dia miasa amin'i Exalead, milina fikarohana frantsay. Niorina taona vitsy lasa izay izy ary nahitana pejy web 16 en 16 miliara ao anatin'ny valin'ny fikarohana.
Ny haino aman-jery sosialy, Facebook, dia mamela ireo mpampiasa azy hizara rohy mahaliana amin'ny mpampiasa Facebook hafa. Ny Hitan'ny Facebook External dia manao karazan'asa maro, anisan'izany ny fampisehoana sary maro, horonan-tsary mampientanentana, ary tranonkala vitsivitsy. Iray amin'ireo robots crawling lehibe sy malaza ny Facebot izay manampy amin'ny fanatsarana ny fampisehoana dokam-barotra.
Alexa Crawler dia miasa amin'ny alàlan'ny Alexa ao Amazon ary ampiasaina handinihana pejy am-polony am-polony. Manangona vaovao momba ireo tranonkala izy ary manome azy ireo mifototra amin'ny preferences eo an-toerana sy iraisam-pirenena.
Misy mpitsikilo sy botsera isan-karazany, ka rehefa manakana tranonkala mampiahiahy ianao, dia tandremo sao tsy manakana ny boot tsara ianao izay manasongadina pejy ao amin'ny tranokalan'ny fikarohana Source .